Top 21+ Decks Clash Royale tsara indrindra amin'ny 2021 | la-manette.com
Top 21+ tsara indrindra Clash Royale Decks 2021
2 décembre 2021 feh Mathilde Grimard
Salama ry zalahy, hasehoko anareo anio Decks Clash Royale tsara indrindra 2021, ireto tsara indrindra Clash Royale Decks 2021 ireto dia tsara amin'ny fanangonana amboara, fandresena amin'ny fifaninanana ary fanamby lehibe. Ao anatin'ity lisitra ity dia nizara deck Clash Royale be dia be izahay izay azonao ampiasaina handresena ny lalao rehetra ao amin'ny Clash Royale. Betsaka ny deck azo alaina ao amin'ny pejy torolàlana Clash Royale.
Raha tsy misy fisalasalana, andao hojerentsika ny 21 tsara indrindra Clash Royale deck izay mandeha tsara amin'ny volana Aogositra amin'ny Clash Royale 2021.
Deck Meta tsara indrindra ho an'ny Clash Royale Desambra 2021
bola sary : theclashify.com
Ity ny Giant Double Prince Deck, izay deck tsara ampiasaina amin'ny Janoary 2021. Meta. Ao amin'io tokotanin-tsambo io, ny Giant no fepetra fototra ho an'ny fandresena sy ny loharanon'ny fahasimbanao, matetika ianao dia manana ny printsy manosika ilay goavambe na manandrana manasazy ny mpanohitra amin'ny minion mega goavambe eo amin'ny tetezana.
Prince sy Dark Prince dia hampiasaina hanohanana ny Giant rehefa mandeha amin'ny fanosehana kaontera ianao ary ny Electro wizard no tena mpanohitra anao amin'ny mpitaingina kisoa, izay ny fisian'ny ankamaroan'ny dikan-teny hafa, miaraka amin'ny prince. Azo soloina Musketeer ho an'ny DPS avo kokoa sy lavitra kokoa izy io, fa ny fitetezana e-wiz dia tena zava-dehibe rehefa milalao amin'ny minion, andiam-miniona, ramanavy, ary na goblin iray aza, satria izy ireo no mamadika azy ireo haingana kokoa.
Manana ny mpitrandraka amin'ity toko ity ihany koa izahay, izay karatra manan-danja indrindra amin'ity toko ity, ary ny fahombiazanao amin'ity toko ity dia hiankina amin'ny fahaizanao mampiasa ny mpitrandraka. Dia hoy aho hoe mora alaina io deck io fa sarotra ny mahafehy azy noho ny tsy ampy taona.
Best Night Witch Clash Royale Meta Decks 2021 Desambra
Loharano sary: ​​theclashify.com
Ity Night Witch Elixir Golem Battle Healer Deck ity dia tena mahery ao amin'ny Clash Royale, Elixir Golem no tanky lafo vidy matanjaka indrindra ao amin'ny Clash Royale. Amin'ny maha-tafika mifikitra indrindra amin'ny lalao, mahatanty kapoka mahery vaika izy ary mety ho tanky ho an'ny miaramila mpanohana anao. Tsy tokony hampiasaina amin'ny fiarovan-tena izany raha tsy izany no fomba farany ataonao ary mila mampiasa elixir telo ianao mba hanavaozana ho vondrona fiarovana tsara kokoa.
Electro Dragon no karatra tsara indrindra ao amin'ny Clash Royale raha hainao ny mampiasa azy, ny fahasimban'ny rojony dia mety hahataitra ny tarika ary hanome fotoana fanampiny ny dragona roa hafa handrava ny mpanohitra. Baby Dragon sy Tornado dia fitambarana fiarovan-tena tsara, ampiasao ity fitambarana ity mba hanalavirana ny vondrona mpiaro azy amin'ny Golem Elixir anao. Misy koa ny fiaraha-miombon'antoka tena tsara amin'ny Electro Dragon.
Amin'ity Night Witch Elixir Golem Battle Healer Deck ity dia mila milalao amim-paharetana ianao ary manangana singa ampy mba handresena ny mpifanandrina. Tena miaro tena ity deck ity, tokony hilalao azy toy ny deck beatdown ianao ary andramo ny hivarotra fahasimbana, hoy indray aho fa ity no deck clash royale 2021 tsara indrindra, izay hanampy anao handresy ny lalao rehetra amin'ny fifandonana mpanjaka.
Pekka Bridge Spam Decks 20121 ho an'ny Arena 11+.
Deck Pekka spam ity, izay deck malaza indrindra amin'ny clash royale, ka maro ny mpilalao pro mampiasa an'io deck io amin'ny fanamby ary mahazo fandresena 12 amin'ny fanamby lehibe. Pekka no fepetra fiarovana sy fandresena voalohany ho an'ity deck ity ary manana Bandit, Electro Wizard, ary Magic Archer izahay hanohana ny Pekka anao miaraka amin'ny fanampian'ny poizina.
Ny Battle Ram no ho fepetra fandresenao faharoa amin'ity deck spam deck ity. Saika handrava tilikambo ny ondrilahy fifaninanana mahazatra raha avela irery ary ho gaga ianao hoe impiry no mitranga izany. Ity dia sarintany tsara ampiasaina ho fitahirizana ireo miaramila velona amin'ny fanosehana fanoherana.
Avy eo dia manana ny Royal Ghost izay azo ampiasaina amin'ny fiarovana satria manimba be dia be. Tsy maintsy mamaly azy amin’ny fanafihana koa isika. Ny tafika an'habakabaka dia tsy afaka manafoana izany raha toa ka amin'ny fomba tsy hita maso fa aza misalasala ny milalao azy amin'ny fiarovana amin'ny karatra toy ny Hog na Miner. Tsarovy ny manandrana mampiasa ny poizina foana mba hiarovana ny tenanao amin'ny paompy elixir amin'ny elixir tokana ary azonao atao koa ny mampiasa ny poizina mba hamongorana ireo vondron'olona toy ny minion hordes, goblin bands, ny tafik'ireo taolam-paty na ny musketeers telo mizara.
Ny vondrona spam anao eo amin'ny tetezana dia ny Aries, ny Bandit, ary na dia ny Royal Ghost aza. Izy rehetra dia azo ampiasaina amin'ny fomba mahery vaika eo amin'ny tetezana mba hanery ny mpifanandrina aminao ary hanery azy hanao fihetsika. Aza hadino ny miaro ny Magical Archer anao mandritra ny lalao ary ampiasao foana ny halavany ho tombontsoanao.
Lava Hound Goblin Cage Deck ho an'ny Arena 10+
Io no deck faharoa amin'ny lisitry ny deck Clash Royale 2021 tsara indrindra, ary ity deck Lava Hound ity dia ahafahanao milalao amin'ny tohatra avo. Raha milalao tsara ianao dia afaka mahazo fandresena mora foana. Ity deck ity dia tonga lafatra ho an'ny mpilalao Arena 10+ ary ny Lava Hound Goblin Cage Deck dia manana taham-pandresena 61,4% amin'ny Grand Challenges.
Vakio ihany koa: Inona ny console retro hividianana - ny console lalao retro tsara indrindra
Amin'ity tokotanin-tsambo ity, ny Lava Hound no tankinao lehibe hitarika anao. Mitovitovy amin'ny golem izy io, arovy ny lava hound miaraka amin'ny dragona zazakely sy ny dragona infernal, ary rehefa miampita ny tetezana ny vondronao rehetra ary tavela amin'ny HP mendrika, avelao ny mpitrandraka ary ankafizo ny fahasimbana goavana. 😛
Ity karatra ity dia manana fiaraha-miasa tsara amin'ny karatra hafa rehetra amin'ity toko ity.
Fepetra fandresena iray hafa ho an'ity lava-drano ity ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, noho ny fahasimbana mety hitranga. Ny mpitrandraka koa dia miasa ho toy ny fanelingelenana hisintonana fahasimbana avy amin'ny tilikambo fahavalo rehefa maty ny Lava Hound anao ary mamela ny puppies hanimba ny tilikambo. Ho fiarovana dia manana Dragona Double, Barbarian ary Goblin Cage ianao.
Royal Giant Mother Witch Deck Arena 11+
Ity no tokotanin-tsambo fahatelo amin'ny lisitry ny deck tsara indrindra ho an'ny Clash Royale 2021. Ity dia tokotanin'ny mpihaza-mpanjono goavam-be mitaingina bisikileta izay ahafahanao mitazona ny tsindry amin'ny fanafihana sy ny fiarovana. Ity deck ity dia ahitana ny karatra Mother Witch vaovao. Ny Fisherman dia tokony hampiasaina amin'ny fiandohan'ny lalao mba hisarihana vondrona ho any amin'ny tilikambo mpanjakanao mba hanandrana sy hahazo fampahavitrihana mialoha izay hanampy anao amin'ny fiarovana mandritra ny lalao sisa.
Ny Royal Giant dia tena matanjaka tokoa amin'ity meta ity noho ny tahan'ny fampiasana karatra ambany toa ny mini Pekka. Izany no fepetra voalohany handresenao ary tokony hampiasaina mandritra ny lalao mba hitazonana ny tsindry sy hanerena ny mpifanandrina aminao hilalao ny elixir amin'ny fiarovana. Biby fiarovana tanteraka ny Hunter ary afaka maka ny ankamaroan'ny vondrona, saingy tsy maintsy mampiasa ity karatra ity ianao hanohanana ny Royal Giant sy ny mpanarato anao satria miasa tsara izy rehefa miaraka amin'ny mpanjono.
Tohizo ny fanerena miaraka amin'ny GR, izany dia hanery ny mpifanandrina amin'ny fiarovan-tena ary hampitombo ny mety ho fahavoazanao.
Manoloana ny tokotanin'ny fasana, miezaha miova lalana, azonao atao ny mampiasa ny e-wiz, Mother Witch, na Barbary Barrel mba hanampy amin'ny fiarovana ny fasana, ary i Mother Witch dia iray amin'ireo karatra tsara indrindra manohitra ny Fasana.
Deck Meta tsara indrindra ho an'ny Clash Royale 2021 Desambra
Ity tokotanin-tsambo ity dia ahitana ny Princess, Goblin Band, Ice Spirits, ary Hell Tower izay azo ampiasaina hanakanana ny ody kelin'ny mpifanandrina aminao mba hahafahanao manasazy azy ireo amin'ny barika goblin izay voalohany indrindra.
Ny Knight dia karatra fiarovan-tena voalohany, izay ampiasaina hiarovana ny tafika mpanohana ary avy eo hanohitra azy ireo amin'ny Goblin Barrel.
Ny Knight dia manome lanja tsy mampino ho an'ny Elixir 3, miaraka amin'ny tanky sy ny fahaizany miaro tena, tsy toy ny Ice Golem. Azo ampiasaina izy io mba hanelingelina ny miaramila mpanohana, raha ny Infernal Tower kosa dia manalefaka zavatra toy ny Giants sy Golems. Azonao atao ihany koa ny mametraka azy eo anoloan'ny andriambavy eo amin'ny tetezana mba ho toy ny tanky ho azy.
Goblin Barrel: Iray amin'ireo karatra manimba ao amin'ny tokotany. Amin'ny ankapobeny dia tiako ny mampiasa izany rehefa avy milalao karatra somary lafo ny mpifanandrina amiko. Raha mametraka Golem any aoriana ny mpifanandrina amiko, apetraho eo amin'ny tetezana ny Knight ary atsipazo Goblin Barrel.
Ity deck ity dia misy ny Princess, ny Goblin Gang, ny Ice Spirits ary ny Infernal Tower izay azo ampiasaina amin'ny ody kely ny mpifanandrina aminao mba hahafahanao manasazy azy ireo amin'ny Goblin Barrel izay fepetra fandresena lehibe indrindra amin'ity Knight Barrel Deck ity. .
Goblin barika : Iray amin'ireo karatra simba ao amin'ny tokotanin-tsambo. Amin'ny ankapobeny dia tiako ny mampiasa izany rehefa avy milalao karatra somary lafo ny mpifanandrina amiko. Raha mametraka Golem any aoriana ny mpifanandrina amiko, apetraho eo amin'ny tetezana ny Knight ary atsipazo Goblin Barrel.
Ity Princess Knight Goblin Barrel Deck Arena 10+ k ity dia manana fepetra fandresena roa dia ny Goblin Barrel sy ny Rocket.
Ireo fepetra fandresena roa ireo dia ny mpaninjara fahasimbanao voalohany indrindra, fa ny iray amin'izy ireo dia saika ampiasaina amin'ny fahasimbana mihodina (Goblin Barrel), ary ny iray hafa (Rocket) dia ampiasaina amin'ny toe-javatra roa ihany. .
Deck Mega Knight Wallbreaker tsara indrindra ho an'ny 2021
Ny Mega Knight no karatra fiarovan-tenanao lehibe miaraka amin'ny Bandit sy Musketeers. Ny Mega Knights dia mamela anao hanararaotra ny fahafahany miditra ao amin'ny kianja, ny fiantraikan'ny knockback dia valiny tsara ho an'ny spam deck sy archetypes.
Vakio ihany koa: Famerenana: Ny sarimiaina Promised Neverland dia fiatoana am-ponja hyperrational tsy misy hadalana loatra.
Ny kaontera manosika ao aoriany miaraka amin'ny Wall Breaker sy Bandit, & Miner, raha mahazo ny vintana ianao, ny fahasalamany ambony dia mahatonga azy ho tanky lehibe ho an'ny Miner. Azonao atao ny mampiasa Miner mba haka vondrona lavitra toy ny Princess, Dart Goblin, na Magic Archer,
Ity Deck Mega Knight Wallbreaker 2021 tsara indrindra ity dia tokony hampiasaina amin'ny fomba mahery vaika kokoa noho ny kitapo mahazatra, na dia matanjaka be amin'ny fiarovana aza; manana ny mpitrandraka, ny mpandrava rindrina ary ny jiolahy ianao hampihatra tsindry ary hampiasa azy ireo eo amin'ny tetezana hanerena ny mpifanandrina aminao handany elixir amin'ny fiarovana,
Ny ankamaroan'ny fotoana dia hiatrika Pekka maro miaraka amin'ny mpamosavy elektrika sy ramanavy ianao. Toy izao ny fomba ifandraisako amin'izy ireo: Apetraho amin'ny halavirana azo antoka ny Musketeer anao, arakaraky ny halaviranao no ahafahanao mametraka azy hanangona elixir tsara kokoa. Rehefa eo amin'ny tetezana ny Mega Knight sy ny Bandit dia atsipazo avy hatrany ny Mega Knight. Tokony hovonoina ny ewiz raha apetraka tsara.
Clash Royale 2021 Decks Golem mpamosavy tsara indrindra
Deck tsara indrindra ho an'ny vao manomboka, ampiasaina amin'ny Clash Royale 2021, Golem no tank lehibe ao amin'ny tokotaninao. Manana fahasalamana tsara indrindra amin'ny tanky rehetra amin'ny lalao izy. Manana fahaiza-mitondra irery ny Tilikambo izy, ary miaraka amin'ny fanohanana toa an'i Mother Witch na Skeleton Dragons, dia tena azo ampitomboina tokoa ny fahafahany. Amin'ny ankapobeny dia hampiasainao amin'ny fotoana elixir roa izany fa matetika, amin'ny toe-javatra izay misy elixir mihoatra ny 2 ao anatin'ny fotoana elixir tokana dia azonao atao ny manetsika ny tilikambo ao anatin'ny roa minitra voalohany.
Skeleton Dragons: Ity dragona roa ity no loharanon'ny fahasimbanao voalohany amin'ity toko ity. Karatra fanohanana lehibe ho an'ny RG izy ireo raha manana vondrona Swarm ao amin'ny tokotany ny mpanohitra anao. Izy ireo koa dia azo ampiasaina ho toy ny karatra fanjonoana ho an'ny ody, fa miezaka ny tsy hanome ny mpifanandrina sanda be loatra rehefa mametraka ity karatra.
Na dia azo zaraina ao ambadika aza ity karatra ity, dia tsara kokoa ny milalao azy ireo satria tsy dia salama loatra izy ireo ary tsy hanimba ny tenany. Ny Tornado dia manana fiaraha-mientana lehibe ao amin'ity tokotanin-tsambo ity satria azo ampiasaina hisintonana vondrona mankany amin'ny fahasimbana amin'ny fahafatesan'ny golem na hanambatra vondrona mba hahafahan'ny Skeleton Dragons manaparitaka ny vondrona misy azy rehetra.
Skeletons Dragons Clash Royale Desambra Meta Decks 2020
Ity Giant Dragons Skeleton Night Witch Deck ity dia tena matanjaka amin'ny fanafihana sy ny fiarovana. Amin'ny fanafihana dia manana ny Giant sy ny Night Witch ianao, amin'ny fiarovana dia manana ny Hunter sy ny Skeleton Dragons ianao.
Ity deck Clash Royale tsara indrindra 2021 ity dia mifototra amin'ny Counter push miaraka amin'ny Giant sy ny fahasimban'ny chip handrava ny tilikambo mifanohitra. Tsy misetrasetra amin'ny minitra voalohany aho, angamba ny taolam-paty ao ambadika, na ilay goavambe ao aoriana aloha.
Raha tsy eo an-tanako ny Giant dia mandeha amin'ny mini pushes toy ny Miner + Skeletons aho, raha mametraka Elixir Collector eo afovoany ny mpanohitra anao dia azonao atao ny manasaraka ny Guards sy ny Skeleton Dragons hanosika ny lalana roa sy ny Miner amin'ny Collector azy. Izany dia hahatonga azy ireo ho sahiran-tsaina ary tsy ho fantatr'izy ireo izay lalana halehanao.
2021 Gobelins Cemetery Deck Cage
Amin'ny fiantombohan'ny lalao, ny laharam-pahamehanao voalohany sy tokana dia ny mamantatra hoe iza amin'ireo deck ampiasain'ny mpifanandrina aminao, ary iza no pawns manohitra ny fasanao ...
Aza mitsambikina avy hatrany, manomboka kely amin'ny Fasana sy Baby Dragon eo amin'ny tetezana.
Mini Pekka Magic Archer Royal Hogs Decks 2021
Ity Royal Hogs Mini Pekka Magic Archer Royal Delivery Deck ity dia manana taham-pandresena 57.1%. Ity Deck Clash Royale tsara indrindra 2021 ity dia deck Cycle indrindra fa misy singa blitz toa ny Royal Hogs sy singa chip toa ny Ice Spirit sy Skeletons miaraka amin'ny Mini Pekka.
Ny Royal Hogs dia manome anao singa haingana amin'ny tsy ampoizina toy ny e barbs sy hog. Ireo karatra efatra ireo no loharano voalohany amin'ny fahasimbana amin'ny ankamaroan'ny lalao. Raha manana baolina afo na Valkyrie ny mpifanandrina dia tsy maintsy miandry ianao mandra-pahatongan'ireo vondrona ireo amin'ny fihodinana.
Ho fiarovana dia manana Hunter izahay, Hunter Ity karatra ity dia tena tsara ho an'ny Elixir 4 saingy manana fahasalamana be izy ary afaka maka Mini PEKKan raha latsaka eo ambonin'ny Hunter. Biby fiarovana tanteraka ny mpihaza ary afaka maka ny ankamaroan'ny vondrona, saingy tsy maintsy mampiasa ity karatra ity ianao hanohanana ny Royal Hog anao.
Ny Magical Archer dia hanohana ny Royal Hog anao sy ny mini Pekka manosika anao aorian'ny fiarovan-tena mahomby. Ny fametrahana dia zava-dehibe, ny Magical Archer dia afaka mahazo elixir be dia be ary ny fametrahana azy araka ny tokony ho izy dia afaka manome lanja be dia be ho anao indrindra raha azonao atao ny manapaka ny tilikambony rehefa manimba ny tarika.
Vakio ihany koa: 10 emulators Android tsara indrindra ho an'ny Windows azonao ampiasaina
Tsara indrindra 2021 Clash Royale Graveyard Electric Giant Deck
Ny fepetra fandresena voalohany dia ny Electric Giant anao ary ny Graveyard no fepetra fandresena faharoa ary tokony hampiasaina amin'ny farany amin'ny lalao raha tsy mieritreritra ianao fa manana fahafahana tsara hampihatra tsindry eo am-piandohan'ny lalao. fahasimban'ny tilikambo, toy ny Mini Pekka na ny Musketeer. Ny Electro Giant dia azo ampiasaina koa raha manohitra izany ianao.
Ny Electro Giant no tankinao lehibe sy ampinga hena ao amin'ity toko ity. Milalao eo anoloan'ireo vondrona mpiaro anao toa ny Mini Pekka sy ny Musketeer mba hanaovana fanoherana. Azonao atao ihany koa ny mampiasa azy io mba hisarihana vondrona amin'ny lalana mifanohitra. Andramo ny milalao ny fasanao rehefa manohitra ny fahasimbana avy amin'ny tilikambo ilay goavambe.
Ho fiarovana dia manana ny Tafika Skeleton sy Mini Pekka ary ny Musketeer sy Bats izahay, indraindray dia azonao atao ny mampiasa Electro Giant amin'ny fiarovana.
Clash Royale Mini Pekka Hog Firecracker Deck 2021 tsara indrindra
Iray amin'ireo tsara indrindra Clash Royale Decks 2021 Jona, amin'ity Clash Royale Deck ity, ny mpitaingina Hog no fepetra fandresena lehibe indrindra amin'ity Best Clash Royale Decks 2021 ity, azo ampiasaina ho lalao fanokafana. Ity no karatra izay hiezahanao hahazo fahavoazana betsaka araka izay tratra. Azonao atao foana ny mampifangaro azy amin'ny Bats raha tsy manana valiny sahaza na miaraka amin'ny Ice Spirit ny mpifanandrina aminao. Izany dia ahafahan'ny mpitaingina kisoa anao hitifitra fanampiny amin'ny anjarany na hanamaivana vonjimaika izay vondrona fiarovan-tena milalao azy.
Ny Mini Pekka dia azo ampiasaina hanampy amin'ny fandravana fiara mifono vy ary koa hanefana ireo vondrona spam toa ny mpitaingina ram, ondrilahy fiadiana, hog na matoatoa. Azo ampiasaina hisambotra zaza tsy ampy taona koa izy io. Andramo averina averina ao ambadik'ity fitaovana ity raha manana mihoatra ny antsasaky ny HP tavela izy. Aza mampiasa an'io karatra io mihitsy eny amin'ny tetezana, fa tokony hampiasaina ho miaramila fiarovan-tena fotsiny.
Clash Royale Hog Firecracker Deck combo tsara indrindra:
Warthog + Ice Spirit (kombo tsy lafo, matetika ampiasaina amin'ny lalao).
Groundhog + Ice Golem (tsara ampiasaina ho tanky groundhog ary mamono miaramila mora vidy toy ny taolam-paty).
Pork + Firecracker (karatra roa tena haingana mifameno tsara)
Pork + Log (ny log dia azo ampiasaina hanalana miaramila mora vidy toy ny skeletons, azonao atao koa ny mandefa pre-logs izay miantoka ny fandavana ny faritra mandritra ny fotoana mihodina ny log.
Elixir Golem Clash Royale Deck 2021
Ny Deck Clash Royale 2021 tsara indrindra ho an'ny Grand Challenge, Elixir Golem no tank tsara indrindra amin'ny lalao ho an'ny 3 Elixir. Aza masiaka loatra amin'ny Elixir Golem-nao, andramo milalao eo anoloan'ireo vondrona fanosehanao na ao ambadiky ny tilikambon'ny mpanjakanao raha manana trano bongo barbariana ianao ao ambany rihana. Ny Elixir Golem Blobs dia manao ny fahasimbana indrindra, indrindra raha ao anatin'ny radius fanasitranana an'ny Combat Healer na ny Fanahy Manasitrana izy ireo.
Ny Spirit of Healing dia tsy karatra fihodinana fotsiny fa fanodinkodinana ho an'ny ody toy ny poizina na baolina afo izay mety hanimba ny karatra fanohanana anao. Afaka manampy ny tarikao handresy ady tetezana 1v1 ihany koa izany.
Ny Electric Dragon dia vondrona fiarovan-tena tsara izay manome anao karatra fanoherana tsara. Afaka manampy amin'ny fampihenana ny vondrona mavesatra izy io ary ny fahaizany manazava ny rojo dia midika fa afaka manohitra ny karatra fanohanana na vondron'olona toy ny minions ihany koa.
Ity no vondrona splash tsara indrindra anaovana amin'ny tokotanin'ny Elixir Golem satria mitondra fahasimbana bebe kokoa noho ny Baby Dragon. Raha azo atao, andramo ny mampiasa azy miaraka amin'ny Elixir Golem amin'ny fanosehana. Ampiasao amin'ny andiam-balala toy ny Goblin Gang na ny Minion Horde. Afaka manohitra ny Musketeer tsara izy. Ny Skeleton Dragons dia ampiasaina hanesorana ny karatry ny Swarm amin'ny Tany sy ny rivotra mba hahazoana varotra Elixir tsara na manohitra ny Thrust Potential Continue Reading "
Manantena ianao fa hahita ity torolàlana ity avy amin'ny Top 21+ amin'ny Decks Clash Royale tsara indrindra amin'ny 2021 (Meta Decks) mahasoa, maneho hevitra eto ambany momba ny Best Clash Royale Decks 2021 tianao indrindra.
Torohevitra famolavolana lalao 10 ho an'ny mpamorona vaovao
Ahoana ny fijerena antontan-taratasy amin'ny mpanonta HP